Izitudiyo zoyilo lwaseSpain ongathanda ukusebenza kuzo | Abadali be-Intanethi
Izitudiyo zokuyila zaseSpain ongathanda ukusebenza kuzo
Iris Gamen | 05/04/2022 20:00 | Idizayini yeMifanekiso
Njengoko besitshilo kwelinye lamanqaku ethu apho besithetha ngabayili bemizobo baseSpain, ilizwe lethu linoluhlu olubanzi lwabayili bemizobo kunye nabalunge kakhulu, kufuneka yamkelwe.
Namhlanje, siza kugxila kwiindawo zokusebenza apho iintlobo ezininzi zeendlela, iiprojekthi kunye nemisebenzi zizalwa khona. Siza kuthetha malunga nezitudiyo zokuyila zaseSpain. Ezi zithuba zezo zinezithembiso ezinkulu zoyilo lwegraphic kwilizwe lethu phantsi kophahla lwazo.
Ngokuqinisekileyo njengabayili, xa ugqiba izifundo zakho, uye wazibuza ukuba yeyiphi istudiyo soyilo ongathanda ukusebenza kuyo. Mhlawumbi uya kuba uphambene ukukhangela, kwaye ufunde ulwazi malunga nenye yazo. Kule post siza kuthetha ngezinye zezona zibalulekileyo kwaye siya kukwenza uphambane ukuze ube yinxalenye yazo.
1 Izitudiyo zoyilo lwegraphic eSpain
1.1 I studio kaCoco
1.3 uxolo Studio
1.4 URubio kunye noDel Amo
1.5 Hee studio
1.6 Umthi we-orenji we-Etxeberria
1.7 Isitudiyo seSulima
1.8 Layita icima
Izitudiyo zoyilo lwegraphic eSpain
Siye saphambana, kwaye sizame ukukhankanya ezisi-9 zezona studio zoyilo lwegraphic kwilizwe lethu. Ukwenza olu khetho, asibahlelanga ukusuka kuninzi ukuya koluncinci kuba ibiyimishini engenakwenzeka.
Ukukhetha ezi studio akukhange kube lula konke konke kwaye siyaqonda ukuba siphose ngaphezu kwesinye, kodwa kungenjalo iya kuba luluhlu olungapheliyo.
I studio kaCoco
Este istudiyo semultimedia, sikhethekileyo kuyilo lwamaphepha ewebhu. Yenziwe ngabachwephesha abanamava abanzi kwaye abakhethekileyo kweli hlabathi, banabayili bewebhu, abadwelisi benkqubo, abayili begraphic kunye neengcali zentengiso yedijithali.
I studio kaCoco Ilawula ukusuka kwisigaba soyilo kunye nophuhliso lwewebhusayithi, ekudalweni nasekuphunyezweni kwezicwangciso ezahlukeneyo zokuthengisa. ukuze banike ukubonakala okuphezulu kwiibrendi abasebenza ngazo.
Kule meko, sithetha nge ukufunda unxibelelwano lwegraphic kunye nophando. Igxile ekukhathaleleni okusingqongileyo kunye nokuzibophelela ekuyilweni kwezixhobo. Phakathi kwemisebenzi yakhe sinokufumana iiprojekthi zesazisi, iincwadi, uyilo lwewebhu, iipowusta, nokunye okuninzi.
Le studio yoyilo yavela eValencia kwi-2007, evela kwizandla zabaqulunqi, u-Alberto Flores kunye noMreiia Juan. Umsebenzi wakhe ugxininise kumbono woyilo lwezifundo ezininzi.
Kwisixeko saseBarcelona unokufumana le studio yoyilo, apho yintoni i-industrial edibeneyo kunye neenkqubo zobugcisa.
Uphononongo olwenziwe linani elincinci leengcali, apho ukuphuhlisa iiprojekthi zoyilo lweshishini, umboniso kunye nokubuyisela. Yaqala ngo-2005, ikhokelwa nguBorja Martínez, owasungula yedwa.
Isitayela esingaqondakaliyo se studio yi umsebenzi woqikelelo lomzimba kunye nemathiriyeli kwizisombululo zegraphic, okubangela oko sixoxe ngako ekuqaleni, umzobo kunye noshishino luhlala kunye ne-artisan.
URubio kunye noDel Amo
Yi studio yoyilo, apho Indalo kunye nolawulo lophawu kusetyenzwa phezu kwayo, kunye nokupakishwa kunye noyilo lokuhlela. Abantu ababini emva kwesi studio nguGuillermo Rubio kunye noJulián Gárnes, owathi ngo-2014 bahlanganisana ukuze benze i-studio emva kweminyaka eyi-10 besebenza ngokwabo.
Ukususela ekuqaleni kwayo, iye yaqokelela inani elikhulu lamabhaso ngemisebenzi eyahlukeneyo njengeMbasa ye-D&DA yeGraphite ngo-2020, uYilo lweSilivere yeLaus yopapasho lwamaxesha ngo-2019, iSilver Laus Corporate Identity Design Inkampani enkulu ngo-2018, iGold Packaging Laus ngo-2016, phakathi kwezinye ezininzi.
Isitudiyo esise-Barcelona sisebenza ukusukela ngo-2007. Iiprojekthi ezahlukeneyo zokudala uphawu, uyilo lwegraphic, imizobo kunye nantoni na eza ngendlela yazo ziyenziwa.
Bathi enye yeemfihlo zayo ukuba ithathelwe ingqalelo enye yezona studio zoyilo zibalaseleyo uthando kunye nengqalelo kwiinkcukacha abazifaka kwiprojekthi nganye yabo.
Umthi we-orenji we-Etxeberria
Ukusuka eMadrid kuza le studio ngokutshintsha rhoqo. Kuyo, iingqondo ezimbini ezinamandla zokuyila ziyadibana, ezo zabasunguli bayo, uDiego kunye noMiguel, abafana nobuhle kunye nokulunga emsebenzini wabo.
Si studio ene- iqela elisisigxina labadali kodwa liguquguqukayo, njengoko lifuna iimpendulo kwiimfuno ezivela kwiprojekthi nganye. Ngamanye amaxesha basebenzisana neengcali ezahlukeneyo ezinetalente ezikhethelwe uvelwano kunye nokuncoma. Oku kuvelisa ubugcisa bezinto ezininzi, obunokutshintshwa kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi.
Naranjo Etxeberria iye yaba wawonga intaphane yamabhaso kulo lonke ixesha lomsebenzi wakhe, njengeyokugqibela abayifumeneyo, iLaus ADG Award. ISilver Synergy (i-typography) ngo-2021.
Isitudiyo soyilo lweGraphic esekwe eMurcia. Bayincutshe kwi uyilo lwezazisi zeempawu kunye namaphulo onxibelelwano lwentengiso. Bazichaza njengabafuna isisombululo.
Kwesi sifundo, uyilo alukho nje umba wobuhle, kodwa baya phambili. Ukususela ngo-2002, basebenza ngeengcamango kunye neengcamango njengeentsika ezisisiseko ukwenza uyilo lwakho kunye nonxibelelwano.
Kule meko sithetha nge ukufunda uyilo kunye nophuhliso lweeprojekthi zombini kwi-intanethi nangaphandle kweintanethi. Ukususela ekusekweni kwayo ngo-2001, basebenze ngeeprojekthi ezahlukeneyo kakhulu. Bayayazi indlela yokufunda kunye nokuvela, kunye nocelomngeni ngalunye oluthiwe thaca kubo.
Kwiprojekthi yabo nganye, baye bafuna izisombululo kwiimfuno ngoyilo kunye netekhnoloji. Ezi zisombululo bezinengqiqo, ziluncedo kwaye zicacile. Bazitsho ngokwabo ukuba bangabayili besiqingatha kunye neenjineli ezisiqingatha., kuba bayila incwadi ngendlela efanayo ne-app.
Ukuba awumazi, sikucebisa ukuba undwendwele iwebhusayithi yakhe kwaye ufumanise iiprojekthi zakhe zophawu. Kolu phononongo OKUNINGI kuqokelelwe, italente eninzi, ubuchule obuninzi, umsebenzi omninzi, impumelelo eninzi, yonke into eninzi.
Ngekomkhulu e-Barcelona, ​​​​kodwa iziseko zisasazeke kwimimandla eyahlukeneyo efana neParis, eNgilani, eNew York naseSan Francisco. Enkosi kolu lwando, I-MUCHO, iba luphononongo apho uyilo luxuba iinkcubeko ezahlukeneyo kunye nemibono.
Njengoko siye sagqabaza ekuqaleni kolu shicilelo, siya kuba sisilela kakhulu, yaye sicula ingoma ethi mea culpa. Ukuba ufuna ukwazi ngakumbi izifundo okanye iiarhente ezinomsebenzi kwilizwe lethu, Sikucebisa ukuba u tyelele i-El Publicista guide, apho unokufumana uluhlu olubanzi lwecandelo lokudala, apho baya kukubonisa izitudiyo zoyilo ezahlukeneyo zelizwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » Izitudiyo zokuyila zaseSpain ongathanda ukusebenza kuzo
Yintoni kunye nendlela yokwenza i-fanzine